NOD32 တစ်ခုချွင်းချက် ADD ဖို့ကိုဘယ်လို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
NOD32 antivirus ကို၏ဖယ်ရန်အရာဝတ္ထုကိုထည့်သွင်းဖို့
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် 10 Vindovs ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာများထဲကတစ်ခု - ကအသံလက်ထောက်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲလက်ထောက် Cortana (Cortana) ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်, သင်အသွားအလာအချိန်ဇယားနဲ့အများကြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူတစ်မှတ်ချက်စကားသံကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဤလျှောက်လွှာကိုစသည်တို့ကိုရုံအသုံးပြုသူဖျော်ဖြေရန်, စကားပြောကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင် Windows 10 ကိုခုနှစ်တွင် Cortana စံရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ကမှာတခါဖြစ်နိုင်နှင့်အားသာချက်များကိုဖျောပွဖို့ပေမယ့် - လျှောက်လွှာ, ရှာဖွေရေးဒေတာအပြင်အခြားဆော့ဖ်ဝဲ, ပြောင်းလဲမှု settings ကို run နှင့်ပင်ဖိုင်ကိုစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Cortana ယခု 10 windose အတွက် operating ဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာ Cortana, ကံမကောင်း, အင်္ဂလိပ်, တရုတ်သာအလုပ်ဖြစ်တယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဂျာမန်, ပြင်သစ်, စပိန်နှင့်အီတလီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သာသည်ဤဘာသာစကားများများထဲမှအဓိကအဖြစ်စနစ်များတွင်အသုံးပြုသောရှိရာ 10, windose သူတို့အား OS ဗားရှင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Windows ကို 10 Cortana ၏ activation
ကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Options ကို"နှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်ဟာ "Start".
ပစ္စည်းရှာတွေ့ "အချိန်နှင့်ဘာသာစကား" ထိုသို့နှိပ်ပါ။
အဆိုပါဒေသများအတွက်, အဘယ်သူ၏ဘာသာစကားထောက်ခံမှု Cortana သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်, ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။
စာနယ်ဇင်းများ "Options ကို" settings ကိုဘာသာစကားအထုပ်။
အားလုံးလိုအပ်သော packages များ download လုပ်ပါ။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Options ကို" အပိုင်းအောက်မှာ "ဒါဟာ".
ပစ္စည်းဆန့်ကျင် box ကို Check "ဘာသာစကား၏ Non-ဇာတိအသံထွက်အသိအမှတ်ပြု" (Optional), သငျသညျတခုဝဲနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားဘာသာစကားကိုမပြောတတ်လျှင်။
ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါ interface ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲသေချာအောင်လုပ်ပါ။
Cortana - လိုချင်သောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူဖို့အချိန်ပေါ်ရောက်လာရန်သေချာစေမည်တဲ့အစွမ်းထက်သောစကားသံလက်ထောက်။ ဤသည်ကမိုးသည်းထန်စွာပမာဏအများကြီးသတိမမူကြသူလူများအသုံးဝင်သည်လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးကို virtual ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်ထောက်၏မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: ESET NOD32 Versión Antivirus 2019 Licencias Desde 2021 Hasta 2028 REAL NO FAKE LIBRE DE VIRUS (စက်တင်ဘာလ 2019).